အပျော်ကစားနေကြတာလား ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အပျော်ကစားနေကြတာလား ။
Posted by etone on Feb 2, 2011 in My Dear Diary | 14 comments
လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ ။
ဒီနေ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုလောက်ရေး မယ်စဉ်းစားတော့ အကြောင်းရာကလည်း ရှာမရ ။ စိတ်ကူးယာဉ် ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ဖန်တီးဖို့ကလည်း အာရုံကမရဆိုတော့ နည်းနည်းလေပြီး အလုပ်ပဲ မဲလုပ်နေမိသည် ။ အလုပ်လုပ်ရတာ အာရုံစိုက်ရဖန်များလာတော့ ခေါင်းက နောက်လာသည် ။ ညည်းစိစိဖြစ်လာသည် နှင့် ပို့စ်တွေဝင်ဖတ်ပြန်သည် ။ နောက်တော့ အကြောင်းရာလေးတစ်ခု ခေါင်းထဲဝင်လာတာနဲ့ အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး နည်းနည်း ဖွမလား စိတ်ကူးမိပါသည် ။
ကျမတို့ တွေ အရွယ်လေးရောက်လာနဲ့ အမျှ ရည်းစား ထားခြင်း ဆိုတဲ့ ကိစ္စလေး နည်းနည်း ပါလာတတ်ပါသည် ။ တစ်ချို့ကလည်း တစ်ယောက်ထဲ နေရရတာ ပျင်းသဖြင့် အဖော်ရှာကြသည် ။ တစ်ချို့ကလည်း သူငယ်ချင်းများက မြှောက်ပင့်ပေးသဖြင့် လက်တည့်စမ်းပြီး ရည်းစားထားကြသည် ။ တစ်ချို့ ကျပြန်တော့လည်း ဒီလူနှင့်တွဲလျှင် ရရှိလာမည့် အကျိုးအမြတ်ကို ရှေးရှူပြီး ရည်းစားထားကြသည် ။ တခြား အကြောင်းများ ကြောင့်လည်း ရည်းစား ထားကြသည် … ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ … လူအများစု ချစ်သူ၊ ရည်းစားထားကြခြင်း မှာ နောင် တူနှစ်ကိုယ် ဘ၀အတူ တည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ချစ်သူရည်းစား ထားကြခြင်းဖြစ်သည် ။ တစ်ချို့လူမျိုးမှာလည်း အနာဂတ်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း အဆင်မပြေ ၊ အသွင် မတူသဖြင့် အိမ်သူ မဖြစ်ကြတာမျိုးလည်း တွေ့ဖူးသည် ။ ရှစ်နှစ် ကိုးနှစ် ချစ်သူဘ၀လက်တွဲခဲ့သော်လည်း ရည်ရွယ်သူ နှင့် အိမ်ထောင် မပြုပဲ ကွေကွင်းရသူများလည်း ရှိသည် ။
ယနေ့ခေတ်တွင် ယောကျာ်းများ အိမ်ထောင်မှူတာဝန်ကျေစရာမလို ၊ အိမ်ထောင်ပြုရန်မလိုပါပဲ စိတ်ခံစားမှူအတွက် ပျော်ပါးစရာ နေရာအများ အများပြားရှိခြင်းကြောင့် ယောကျာင်္းကောင်းများပင်လျှင် အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် နှောင့်နှေးအချိန်ဆွဲတတ်ကြကြောင်းလည်း သိရသည် ။ အိမ်ထောင် အတည်တကျ ယူထားခြင်း မရှိသဖြင့် အခြား မိန်းမများနှင့် အခပေးဖြစ်စေ ၊ အခမဲ့ ဖြစ်စေ ပျော်ပါးသော်လည်း အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှူပြသနာမျိုး မရှိနိုင်ဟု ခံယူထားကြသေးသည် ။
ချစ်သူရည်းစား ထားသော်လည်း လက်ထပ်ဖို့အထိ လုံးဝမရည်ရွယ်ခဲ့သော လူတစ်ယောက်အကြောင်းတစ်စွန်းတစ်စ ဖွရပေဦးမည် ။ ထိုလူသည် အိမ်ထောင်ပြုရန် ကျော်လွန်သော အရွယ်သို့ ရောက်သည့် တိုင်အောင်ပင် မိဘကို လုပ်ကြွေးနေသည် ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ချစ်သူ ဖြစ်သော မိန်းကလေးအား လက်ထပ်ခြင်း ကိစ္စ စောင့်ဆိုင်းစေခဲ့သည် ။ ထို မိန်းကလေးနှင့် ချစ်ကြိုက်နေစဉ် အတွင်းမှာပင် တခြား သော အပျော်ပါး လိုက်စားခြင်းမျိုးလည်း ရှိသည် ။ ကြုံလျှင်ကြုံသလိုလည်း ကျူတတ်သေးသည် ။ ထို မိန်းကလေး ဘက်မှလည်း စင်းလုံးချော ခြောက်ပစ်ကင်းတော့ မဟုတ်ပေ ။ သူ့မှာလည်း အီလည်လည် ရစ်သီရစ်သီလုပ်နေသော ငနဲများ ရှိသည် ။ အကူညီလိုလျှင်ပေးတတ်ပြီး ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာ ရံဖန်ရံခါ လက်ဆောင်ပေးတတ်ကြောင်းလည်း သိရသည် ။ အမျိုးသားက အိမ်ထောင်မပြုပဲ ဒီအတိုင်းနေမည်ဖြစ်ကြောင်း လို အပ်သမျှကိုလည်း ထောက်ပံ့ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသော်လည်း ကောင်မလေးမှာ မငြင်းဆန်ပဲ ရေလိုက်ငါးလိုက်မျောနေသည်မှာ ကျမနားမလည် နိုင်အောင်ပင် ။ အိမ်ထောင်မှူ ၊ ဘုရားတည် ၊ ဆေးမှင် စုတ်ထိုး ၊ ဤလေးချက်မပိုင်လျှင် နောင်ပြင်ရန်ခက်သကဲ့သို့ ဆိုသော်ငှားလည်း အိမ်ထောင် ပြုခြင်း အမှူကို အလေးနက်ထားသည်ကို မတွေ့ကြရပေ ။ အမည်ခံရည်းစားထားသော်လည်း ရေကြည်ရာ မြတ်နုရာ ရှာ ဖွေနေကြသော လူများကို ကျမရွံ့ မုန်းမိသည် ။ သစ္စာတရားဆိုတာ ၄င်းတို့ကြားမှာ မရှိပေ … ထို့အတူ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လည်း ရှိမည် မထင် ။ ကိုယ် ချင်း စာစိတ်ရှိမှတော့ သူများ သားသမီးကို တွဲပြီး မယူပဲ နေမှာတော့ မဟုတ်ဘူးဟု ကျမသုံးသပ်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ တစ်ချို့လူမျိုးကြတော့လည်း စပွန်ဆာ ဘယ်လောက်ပေးနိုင်လဲပေါ်မူတည်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးကို စဉ်းစားကြတယ်…။ ဒါက အတုအယောင်ပါ မေတ္တာစစ်မပါတဲ့ အတွက် တစ်လအတွင်းမှာပဲ အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်လာပြီး ကွဲကြပြဲကြနဲ့ တစ်ခုလပ်တွေဖြစ်ကုန်ရော ။ ဒီလို တစ်ခုလပ်တွေက ဖောက်ဖွားလာတဲ့ ကလေးတွေကလည်း သနားစရာကောင်းပါတယ် ။ စိတ်ဒါဏ်ရာတွေရပြီး အဖေကို မုန်းတဲ့လူဆို ယောကျာ်းလေးတွေ ထည်လဲတွဲပြီး အသည်းကခွဲ။ အမေမုန်းသူဆိုလည်း ဒီလိုပါပဲ လက်စားချေ ။ အို ရှုပ်ယှက်ခတ်နေအောင်ပါပဲ တစ်ခါတစ်ခါ လူ့ဘ၀ ရှုပ်ထွေးလှပါဘိနဲ့ ။ ဘယ်လိုများနားလည်ရမလဲတောင် မသိတော့ဘူး ။ ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါး စိတ်ဒုက္ခမရောက်ရင် အကောင်းဆုံးပါ ။ လက်ထပ်ဖို့ ထိ မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ အပျော်သဘော တွဲနေတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ အမျိုးသားကလည်း မိဘကို အကြောင်းပြပြီး အိမ်ထောင်မပြုတာဆိုလျှင် မိန်းမတွေနဲ့ မပတ်သတ်သင့်ပါဘူး ။ အစ်မတွေ နှမတွေ ရှိတာပဲလေ ကိုယ်ချင်းစာတရား လက်ကိုင်ထားသင့်ပါသည် ။ မိန်းကလေး ဘက် ကတောင် နစ်နာတယ်ဟု မတွေးပဲ သူလည်း တွေးစရာမလိုဟု မမှတ်ယူသင့်ပါ ။ တွဲသွားတွဲလာ ပြုခဲ့စဉ်ကတည်းက မိန်းကလေးဘက်မှ အများကြီးနစ်နာပါသည် ။ တောကျို အုံကြားမှ အမျိုးသမီးဖြစ်လင့်ကစား ဒီလို ဖြစ်ရပ်မျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး ။ မွေးချင်းထဲမှာ နှမ ၊အစ်မမရှိလို့လည်း ၀ဍ်လည် စရာ မရှိဘူး မထင်ပါနှင့် သံသယာမှာပါ ကံကံဧ။် အကျိုးကို ခံစားရမှာပါ ။ အမျိုးသမီး ဘက်မှလည်း လိုတရနေသည့် ဘ၀ဖြင့် ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်ခြင်းထက် သားမှတ်မှတ် ၊မယားမှတ်မှတ် ပေါင်းသင်းမည့် ချစ်သူမျိုးကို ရွေးချယ်ခြင်းက မှန်ကန်ပေလိမ့်မည် ။ လတ်တလော လူငယ်တွေကြားဖြစ်ပျက်နေသည်မှာ ကလပ်သွား ၊ မူးအောင်သောက်ပြီး ၊ တည်းခိုခန်းရောက်သွားသည်ဟူသော သတင်းမျိုးလည်း ကြားနေမိသည် ။ ကျမသာ ထို့သို့မိန်းကလေးမျိုးဧ။် မိခင်ဖြစ်လျှင် အနီးကပ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မည်ဟု တွေးမိသည် ။ (သို့သော် … လက်ရှိ အိမ်ထောင် မကျသေးဘူး … လူလွတ်ဖြစ်သည် ။ ဟိဟိ ကြော်ငြာဝင်တာ )။ တဒဂ် သာယာမှူကို မက်မောကြသော်လည်း ကျန်းမာရေး အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါကြောင်းတွေ့ရသည် ။ ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည် ။ အနောက်နိုင်ငံများတွင် အထက်တန်းကျောင်း တက်စဉ်ကတည်း က မိမိကိုယ်ကိုယ်မည်သို့ ပြုမူနေထိုင်ရမည်ဟု ပညာပေးနည်းလမ်းများပါ သင်ကြားပေးကြောင်း ပြန်တော်ပြန် ရွှေတစ်ယောက်က ပြောပြဖူးသည် ။ ပြီးခဲ့သည့် တစ်ပတ်ခန့်က ကျမသူငယ်ချင်း ဆေးခန်းဖွင့်ရာ သို့ အလည်သွားစဉ် ဆေးခန်းတွင် က ပ်ထားသော စာကြောင်းလေးကြောင့် အံ့သြခဲ့ရသေးသည် ။ ကိုယ်ဝန်လုံးဝဖျက်မချပေးပါတဲ့ရှင် ။ ကျမလည်း သူ့ကိုမေးကြည့်တော့မှ လက်မထပ်ရသေးပဲ လွန်ကြူးတဲ့ စုံတွဲတွေ လာလာပြီး ဒီဟာလုပ်ပေးပါ ပြောလွန်းလို့တဲ့ အစကတော့ ဟောက်လွှတ်ရတာပေါ့ ..။ စိတ်တိုတိုနဲ့ ငေါက်ပစ်တာတောင် အမျိုးမျိုးလိမ်လည်ပြီး လာနေကြလွန်းလို့ ကြော်ငြာကပ်ထားရတယ်တဲ့…။ အဲ့ဒါမြင်မှ လှည့်ပြန်သွားတာလည်း ရှိတယ်လို့ပြောပါသည် ။ တစ်ပတ်လျှင် နှစ်တွဲခန့် ထိုကိစ္စပြုလုပ်ပေးပါရန် တောင်းဆိုကြကြောင်းလည်း သိရသည် ။ အရင်ကဆို ဒီလိုလုပ်ပေးပါပြောတိုင်း ငေါက်လွှတ်ပြီးပြန်ခိုင်းပေမဲ့ ယခုတွင် နားဝင်အောင်ရှင်းပြကြောင်းလည်း ပြောပြသည် ။ လူ့အသက်ရခဲလှကြောင်း ၊ မိသားစုဘ၀နှင့်နေလျှင် ရင်သွေးမှာ အိမ် ဆည်းလည်း သံဖြစ်ကြောင်း ရာဇ၀တ်မှူသင့်တတ်ကြောင်း ၊ ချော့တစ်မျိုး၊ ခြောက်တစ်လှည့်ဖြင့် နားချပြီး ပြန်လွှတ်ရကြောင်းလည်း သူက ရှင်းပြခဲ့သည် ။ ငွေးကြေးအခက်ခဲအရဆိုလျှင် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံများလည်း ရှိကြောင်း စာရေးပြီး စေလွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပြခဲ့သေးသည် ။ ကျမသာဆို စိတ်တိုလို့ အော်ပစ်လိုက်မှာပါ … နင်တို့ငါ့ကို ဘာထင်လို့ ဒီလိုလာလုပ်ခိုင်းတာလဲ ဘာညာ နဲ့ (ဖြစ်နိုင်လျှင် နားရင်းပါအုပ်လိုက်ဦးမည် ) …။ ရည်းစားထားခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲမှာ ဆိုးကျိုးများစွာရှိနိုင်တာမို့ မိမိစိတ်ကို နားလည်အောင် အရင်စမ်းစစ်ကြည့်ပြီး မှ ချစ်သူရည်းစားထားသင့်ပါသည် ။ အမိုက်မှောင်မှာ ယစ်မူးမနေကြပဲ ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် သစ္စာထားပြီး ချစ်သောသူနဲ့ ပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည် ။
(အိမ်ထောင် မပြုပဲ ပွေလီနေသော အမျိုးသား နှင့် မတည်မငြိမ် စိတ်ကစားနေသော စပွန်ဆာရ မမတို့အား ရည်ရွယ်ပြီး ရေးသားသည် ။ )
ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော နားမထောင်တဲ့ လူစားတွေ အများကြီးပါ .. ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးတော့ လက်မထပ်သေးပဲ အတူနေကြတဲ့ ကိစ္စကို အထူးလုပ်ပြီး မပြောကြတော့ပဲ .. အချိန်မတန်ပဲ မလိုချင်သေးရင် ကိုယ်ဝန် မရဖို့ကိစ္စကို အဓိကထားပြီး သင်ပေးနေရတဲ့ အချိန်ကို ရောက်နေပြီလို့ ဆိုရပါမယ် ..
ဒါတောင် လိုက်နာဖို့ ဝေလာဝေး .. အိတုန်ရေးခဲ့သလိုပဲ .. မရှူနိုင် မကယ်နိုင်အဆင့်ကို ရောက်နောကတုန်းပဲ ..
စားဆေးတွေ ထိုးဆေးတွေ .. အရေးပေါ်ဆေးတွေ ဘယ်လို ပြောပြော .. အဲဒီအချိန်ကျရင် မေ့နေကြတဲ့လူတွေ အများသားပါကွယ် ..
ကြားတယ် မြင်တယ် သိတယ် ကျနော်တို့အနားမှာက အဆောင်တွေပေါတယ် ခုတောင်အဆောင်တစ်ခုကပိုင်ရှင်အန်တီကြီးက ဆုံးမလွန်းလို့
တစ်ဆောင်လုံးပြောင်းသွားကြတာနော် ………………နယ်တွေကတက်လာတဲ့ ဆံပင်အရှည်ကြီး နဲ့ ချည်လုံချည် လေးတွေပြောင်းလဲပုံက ဆန်းတယ် သူတို့လစာကလဲစိတ်ဝင်စားစရာ.. အန်ကယ့် မိန်းမပေးသလောက်နဲ့ပဲဝင်လုပ်သမီးတဲ့ ပီးမှ အန်ကယ် ကြည့်ရှင်းပေးမယ်တဲ့ လိုတာရှိရင် ၀၉…….. ကိုဆက်လိုက်တဲ့ ဘယ်လောက်လွယ်လဲဗျာ
အဆောင်ပိုင်ရှင်အန်တီကြီးကပြောတယ် သူတို့ကြားမှာလဲ စပွန်ဆာဆိုတာအားကြီးခေတ်စားတာပဲတဲ့
ဖတ်ပြီးတော့ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိဘူး။ ကိုယ်က သစ္စာမရှိမှတော့ တူသော အကျိုးပေးမယ်လို့ ထင်တာဘဲ။
အိမ်ထောင်ရေး မပြောနဲ့ ချစ်သူတွေတောင် ၂လ ၃လ တွဲမိရင်တောင်တော်တော် အချိန်ကြာကြာ ချစ်နိုင်တဲ့ သစ္စာရှင်တွေ ဖြစ်နေသလိုဘဲ။
စပွန်ဆာခေတ်မှာ တောကြိုချုံကြား လူလာဖြစ်ရတာ နာတယ်ကိုလန်ရေ…….. မြို့ကြီးမှာသာ လူဖြစ်ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးနေမိတာ ။ နောက်တာနော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ…..။ ပေးသူ ယူသူ ကြည်ဖြူလို့ မတမ်ကောတာပါ။ ပေးတဲ့သူချည့်ရှိနေပြီး ယူမဲ့သူမရှိရင် … ယူမဲ့သူပဲရှိပြီးပေးမဲ့သူမရှိရင် ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးတွေမရှိနိုင်ပါဘူး ။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့ဟာနဲ့သူ တန်ရာတန်ရာ တွေ့ကြတာပဲလို့ တွေးပြီး စိတ်လျော့လိုက်တာက ပိုကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်
လွယ်လွယ်နဲ့ ရနေတော့လည်း တာဝန်မယူချင်တဲ့ လူတွေအတွက် အကြိုက်ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ တစ်ခု သတိထားသင့်တာက မြို့နေ လူတန်းစားထဲမှာ အေကိုက်သွားတဲ့သူ တော်တော်များများဟာ အဲလို အမှန်အကန်တွေကိုမှ တွဲတဲ့ လူတွေ ဖြစ်ကြောင်းပါ။
နောက်တစ်ခုက အိမ်ထောင်ပြုသင့်တဲ့ အသက်အရွယ်ဆိုတာ ကျား၊မ နှစ်ဦးစလုံးမှာ ရှိပါတယ်။ အရွယ်လွန်သွားရင် ဘာမှ မကောင်းပါဘူး။
နွားနို့ဝယ်သောက်လို့ ရနေတာပဲ၊ နွားမွေးစရာ မလိုဘူးလို့ ဆိုကြပေမဲ့ နွားနို့စစ်စစ် သောက်ချင်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင် နွားမွေးမှပဲ ရပါလိမ့်မယ်။
နောက် ယောင်္ကျားလေးတွေ အနေနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတာ နောက်ကျရင် စီးပွားရေးလည်း နောက်ကျတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကိုယ်တွေ့ပါ။
ကျနော်လည်း စပွန်စာပေးချင်လို့ ရှာနေပါတယ်။
မှတ်ချက် – ကြောင်မ မဖြစ်ရ၊ လူမလှလှ သန့်သန့်လေးဖြစ်ရမည်။ သဘောကျလျင် ပွဲခကို စပွန်စာအား ပေးသည့်အတိုင်းပေးမည်။
တွေ့ထားတဲ့သူတော့ရှိတယ် … လူမတော့ လူမပဲ …ဒါပေမဲ့ လူလည်မပါ
ဦးကြောင်ကြီးနော် ခုခောတ်လူငယ်တွေကို ဘာများမှတ်နေလဲ…. ဦးကြောင်ကြီးတို့လည်တယ်ဆိုတာထက် အဆမရေမတွက်နိုင်အောင်လည်တာနော်…. လျှော့မတွက်နဲ့……. ကိုယ့်ဘာသာ အေးအေးဆေးဆေး ကြောင်မ ပဲရှာပါ…. ကြောင်မ မဖြစ်ရဆိုတာကြီးကိုဖြုတ်လိုက်နော်……
ကြောင်ကလည်း ကြောင်လည်ပဲ တွေ့ကြပြီပေါ့ တစ်ပွဲတစ်လမ်းတော့ ဟေးးး ပွဲကောင်းရင်ခေါ်လိုက်ဦး
ကြောင်ပွဲစား လုပ်မှနဲ့ တူတယ်။ ဥပဒေ အရ လူပွဲစားလုပ်ရင် လူကုန်ကူး အမှုနဲ့ မလွတ်ကင်းတတ်ပေမဲ့ ကြောင်ပွဲစား လုပ်ရင်တော့ အေးဆေးဘဲ။
ဇရက်တောင်ပံကျိုးနဲ့ ဘာခံတွင်းပျက်ဆိုလားပဲ… ကြောင်ကြီးရော ကြားဖူးလား…
ဒီခေတ်ထဲမှာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ဆိုတာ တော်တော်ကြီး စဉ်းစားရမယ့် ကိစ္စပဲ…
တစ်ယောက်တည်းတောင် မနည်းရုန်းကန်နေရတာ… အိမ်ထောင်တစ်ခု ထူထောင်ဖို့ဆိုတာတော့ တော်တော်မလွယ်ဘူး…
စပွန်ဆာဆိုတဲ့လူတွေက တော်တော်ပေါနေကြတယ်ထင်တယ်နော်… ဟိုတလောက ကြားလိုက်တယ်… စားသောက်ဆိုင်က သီချင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို သူဌေးက ပါဂျဲရိုးပေးလိုက်တယ်တဲ့.. နောက်တော့ သူကိုယ်တိုင် ကားမောင်းသင်ပေးနေတယ်ဆိုလား…
အင်းပေါ့လေ.. ပေးသူနဲ့ ယူသူ သဘောတူတယ်ဆိုတော့လည်း ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ…
ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ မိန်းကလေးပီပီ ထိန်းသိမ်းဖို့ပဲ အရေးကြီးတာ… ဒီလို လူတွေကြားထဲမှာပေါ့…
အကြောင်းအရာက မိမိနှင့်ပက်သက်သော မိမိတူ၊တူမများနှင့် ရင်းနှီးသောအသိုင်းအ၀ိုင်းမှဖြစ်သည်။ ထိုသူလေးများမှာ မိန်းကလေးငယ်များဖြစ်သည် မိဘများမှာလည်း ပညာတတ်များဖြစ်ကြပါသည်။ထိုကလေးမများသည်လည်း ပညာတတ်ကလေးများဖြစ်ကြသည်။ထိုခလေးမလေးများသည် မိဘရှေ့တွင်လည်းယောက်ကျားလေးသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူသွားအတူလာ၊သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်ဟု အကြောင်းပြကာ မိဘများ၏မျက်ကွယ်၌အတူနေကြသည် အထိဖြစ်ကြသည်။
ထိုနောက်ကျော်မကောင်းကြားမကောင်းများ ဖြစ်လာသောအခါ ယောက်ကျားလေးဘက်မှငြင်းဆန်ပါသည်။မိဘများ ပညာတတ်များဖြစ်ပါလျှက် သားသ္မီးများလည်းပညာတတ်များဖြစ်ပြီး အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့သော အကြောင်းအရားများနှင့်ကြုံတွေ့ ရပါသနည်း။
ယနေ့ အချို့သောလူငယ်များ၌ (ဟီရိ ဩတ္တပ္ပ တရား)ဆိုတာကို မသိတော့တာလား။သွန်သင်ဆုံးမ ပေးသောသူများမရှိတော့၍လား၊ဆိုတာကို ဝေခွဲ၍ပင်မရတော့ပါ။
အခုခေတ်မှာ အိမ်ထောင်တစ်ခုထူထောင်မယ်ဆိုရင် စားရေးထက် နေရေးခက်တာကြောင့် လက်တွဲဘို့လက်တွန့်သွားတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
ကျားကလ ည်း ကျားစည်းကို ကျော်မလာနဲ့ မကလဲ မစည်းကိုကျော်လာရင် လက်မခံနဲ့။
ဒါဆိုရင် မဖြစ်သင့်တာတွေတော့ မဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်ပါရဲ့။